JINGHPAW KASA: HPAKANT KAW MHH NI GASAT MYEN (2) SI
HPAKANT KAW MHH NI GASAT MYEN (2) SI
Jinghpaw Mungdaw Hpakant Mare, Yuma lawk kaw September (5) ya jahpawt hkying (8:30am) ten ram hta Seng Ja Bum de na majan sum nna htingnut wa ai myen hpyen hpung ni hpe Mung Shawa Hpyen Hpung (MHH) ni kawn Cycle bawm hte hkap gasat lai wa sai lam shiga na chye lu ai. N dai zawn hkap gasat ai hta myen hpyen la (2) si nna, (3) hkala hkrum lai wa sai lam shiga na chye lu ai. Ya ten Hpakant Ginra hte myen hpyen ni gaw hkrat sum, hkala ai ni nau law wa ai majaw myen dap kaw na hprawng ai myen hpyen la nnan ni grai hprawng ai lam, n dai laman sha myen hpyen la (30) ram hprawng sai lam shiga na chye lu ai. Seng Ja Bum hpe zing la na matu myen asuya hpyen hpung ni gaw Ta Mahkan, Se Zin, Hawng Pa maga na hpyen n gun (400) ram bai htu lung wa nga sai lam hpe mung matut na chye lu ai.
ဖားကန့် ယူမာတွင် KIA ပြည်သူ့စစ်တို့ ဗုံးဖြင့်တိုက်ခိုက် စက်တင်ဘာ ၅ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲအချိန်တွင် ဆိုင်းဂျာဘွမ်မှ ဆိုင်းတောင်သို့ အထိခိုက်အကျဆုံးများစွာဖြင့် တပ်ဆုတ်လာသော ဗမာစစ်တပ်သည် ဖားကန့်မြို့အလွန် ယူမာအရောက်တွင် အသင့်စောင့်ဆိုင်းနေသော KIA ပြည်သူ့စစ်တို့သည် ဆိုင်ကယ် မိုင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဗမာစစ်သား နှစ်ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီး၊ သုံးဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း ခိုင်လုံသောသတင်းရပ်ကွက်မှသိရပါသည်။ ယခုအခါ ဖားကန့်ဒေသတွင် အစိုးရစစ်တပ်သည် အထိခိုက်အကျအဆုံးများသဖြင့် တပ်သားအသစ်တို့ထွက်ပြေးလျှက်ရှိကြောင်း၊ တပ်သား ၃၀ ခန့်အထိ လက်နက်ထားပြီးထွက်ပြေးမှုများဖြစ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ယခုအခါ ဆိုင်းဂျာဘွမ်အား သိမ်းယူရန် ဗမာစစ်ကြောင်းများ တာမခံ၊ ဆယ်စင်း၊ ဟောင်ပါး ဖက်မှ တပ်အင်အား ၄၀၀ ခန့်ထမ်မံစစ်ကြောင်းထိုးလာကြောင်း ထောက်လှမ်းရေးသတင်းအရသိရပါသည်။
Yawng hpe anut kabai kau mu, langai pi hkum ngam da mu, ntara ai hpyen ni re.
grai na kabu sai wa re.dai sawa myen yawng hpe sat sha myit kau mu jahkrung hkum tawn da.